Ukuqaliswa KweLithium Kuthola Okungathi Sína Ngokuphathelene Nezenhlalo | Martech Zone
Ukuqaliswa KweLithium Kuthola Okungathi Sína Ngokuphathelene Nomphakathi
NgoMsombuluko, Septemba 9, 2013 NgoLwesibili, Septhemba 10, 2013 Douglas Karr
ILithium yethule uchungechunge lwamavidiyo oluhlekisayo ne-microsite entsha, Thola Okungathi Serious Ngokuya Komphakathi ukuhlekisa iSocial Media nokuhlinzeka ngamaphepha amhlophe afundisayo okusiza izinkampani ngecebo labo lokuxhumana. Futhi kufakwe i- ukuzihlola. Amavidiyo afaka:
Customer Isevisi neMidiya Yezokuxhumana
Ini Ukuthandwa kuhlobene Nemiphumela Yebhizinisi
Futhi I-lithium ifaka amakati… Ukuhlekisa ngezinkampani ezisebenzisa amakati
Ngabe iLithium isebenzise amakati ngempela ukuhlekisa ngezinkampani ezisebenzisa amasu ezokuxhumana namakati?
Embhalweni oseceleni… Ngicabanga ukuthi ngisebenze nabalingiswa abaningi kulawa mavidiyo.
Tags: uzimiselethola amavidiyo abucayilithium
I-Everypost: Uhlelo lokusebenza lweselula olulodwa lokushicilela yonke indawo
Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe we-2013 B2B